दाँतको समस्या र दुखाइ बाट पिडित हुनुन्छ ? यसो गर्नुहोस् दाँतको दुखाइबाट छुटकारा पाउँन - ज्ञानविज्ञान
दाँतको समस्या र दुखाइ बाट पिडित हुनुन्छ ? यसो गर्नुहोस् दाँतको दुखाइबाट छुटकारा पाउँन
दाँतको सोझो सम्बन्ध पाचन पक्रियासँग हुन्छ । दाँतले राम्ररी चपाएको खानेकुरा पाचन यन्त्रमा पुगेपछि शरीरले ग्रहण गर्छ । त्यसैले कुनैपनि खानेकुरा विस्तारै एवम् राम्ररी चपाएर खानुपर्छ भनिन्छ । अतः यसरी खानेकुरा चपाउनका लागि दाँत बलियो हुनुपर्छ । बलियो भएर मात्र पुग्दैन, सफा पनि हुनुपर्छ । किनभने खानेकुरा चपाइरहँदा त्यसमा दाँतको फोहोर मिसिनु हुँदैन । दाँत अस्वस्थ्य भएमा खानेकुरा स्वत दूषित हुन्छ ।
दाँत को हेरचाहा र ब्रस गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
१. बल लगाएर दाँत नमाझौँ
बल लगाएर दाँत माझ्दा बढी सफा हुन्छ भन्ने भ्रममा नरहनुस् । यसो गर्दा फाइदा कम नोक्सान बढी हुन्छ । बल लगाएर माझ्दा तपाईंको गिजाको तन्तु र दाँतको इनामेलमा नोक्सान पुग्छ ।
यति मात्र होइन, आवश्यकताभन्दा बढी समयसम्म दाँत माझ्नुसमेत फाइदाजनक हँुदैन । यसैले सधैं नरम ब्रसले दाँत र गिजामा सामान्य दबाब दिँदै दाँत माझ्ने गर्नुस् ।
२. केही खाए लगत्तै कुल्ला गरौँ
हामीले मुख्य आहारबाहेक गुलियो, बिस्कुट आदि खाद्यपदार्थ खाएलगत्तै राम्ररी कुल्ला गर्‍यौँ भने दाँतको समस्या हतपती हुन पाउँदैन । पानीले कुल्ला गर्दा दाँतमा अडकिएर बसेका अन्नकणहरू सहजै बाहिर निस्किन्छन् र दाँत सफा हुन्छ ।
३.दतिवन पनि राम्रो
हाम्रा गाउँघरतिर दतिवनले दाँत माझ्ने गरिन्छ । अझ त्यहाँ मौसम विशेषअनुसार नीम लगायतका विभिन्न वनस्पतिको हाँगालाई दतिवन बनाएर दाँत माझ्दा यसले मुख स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा पुर्‍याउने मान्यतासमेत छ ।
दतिवन पनि दिनहुँ दुईपटक गर्नुपर्ने औल्याउँदै डा. कोइराला भन्छन्, ‘अझ नुनमा दतिवन वा औँला चोपेर दाँत माझ्दा निकै फाइदा हुन्छ ।’
कसरी ब्रस गर्ने त ?
ब्रसमा पेस्ट लगाएर दाँत, गिजा एवं दाँतको मिलन स्थल इनामेलमा राखेर ब्रसलाई दाँतमा बिस्तारै तलमाथि, अगाडि–पछाडि, दायाँ–बायाँ ४५ डिग्रीको कोणमा घुमाउनुपर्छ । यही प्रक्रिया सबै दाँतका लागि अपनाउनुपर्छ । यस्तै, हरेक दाँतको भित्री सतहलाई समेत बिस्तारैबिस्तारै सफा गर्नुपर्छ । दाँतको चपाउने सतहमा ब्रसलाई राखेर अगाडि–पछाडि चलाउनुपर्छ ।
तालु र जिब्रोतिरको खण्डलाई सफा गर्न ब्रसको अगाडिको खण्ड उपयोग गर्नुपर्छ । ब्रस गरेपछि राम्ररी कुल्ला गर्नुपर्छ र गिजालाई हल्का मालिस गरेर पुन: राम्ररी कुल्ला गर्नुपर्छ । बिहानजस्तै रातिसमेत यसै प्रकारले नियमित ब्रस गर्ने प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्छ । दाँत सफा गरेपछि जिब्रोसमेत सफा गर्न बिर्सनु हुन्न ।
यी खानेकुरा खानुस् ​दाँत चम्काउनुस्
शारिरिक सुन्दरता कायम राख्नका लागि दाँतले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । मानिसले मुसुक्क हास्दा राम्रो देखिन्छ । त्यहि माथि राम्रो दाँत छ भने त सुनमा सुगन्धनै हुन्छ ।
त्यसैले दाँत चम्काउन यस्ता खानेकुरा सेवन गर्नुहोस्ः
– दिनहुँ कम्तिमा एक गिलास दुध पिउने
– किबी फल खाने
– स्याउ खाने
– नाशपाती खाने
– सुन्तलाको जुस सेवन गर्ने
– तिल चपाउने
– खाना वा खाजा खाइसकेपछि अलिकति भएपनि सोँफ चपाउने
– चुइंगम चपाउने
– चीज तथा पनीर खाने
– प्रसस्त पानी पिउने
दाँतका रोग निको हुने केहि घरेलु उपाय
काँक्रो टुक्रा पारेर दाँतमा राख्दा पनि दुखेको ठाउँमा राहत पुग्छ।
दाँत दुखेको ठाउँमा तातो टिब्याग राख्दा पनि राम्रो हुन्छ । टिब्यागमा भएको ट्यान्निक एसिडले गिजा फुल्नबाट रोक्छ ।
अदुवाको बोक्रा ताछ्नुस् र यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाउनुस् । त्यसपछि दुखेको दाँतनेर लगेर मजाले चपाउनुस् । बिस्तारै दुखाइ कम हुँदै जान्छ ।
दाँत दुखाइ ठीक पार्न ल्वाङको तेल अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ । ल्वाङको तेलका दुईतीन थोपा एउटा कपासको डल्लोमा भिजाउनुस् ।
अनि त्यसमा एक चौथाइ चम्चा जैतूनको तेल मिसाउनुस् । त्यसपछि दुखेको दाँतमा यो राखेर मुख बन्द गर्नुस् । यसले दुखाइ कम गर्छ ।
खोकी लाग्दा खाने गोलीहरूले पनि दाँतको दुखाइ ठीक पार्छन् । यस्ता गोली चुस्नुस् । गोली नचबाउनुहोला है।
आजकाल युवायुवतीले दाँत बाध्ने गरेको देखिन्छ किन होला ?
दाँत बाँध्ने काम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । अनुहारको रुपमा सुन्दरता ल्याउनका लागि दाँत बाँधेर साइजमा ल्याउने कार्य भएको हो । दाँत विग्रिएका सबै उमेरका व्यक्तिले दाँत बाँधेर मिलाउने गर्छन् ।
यो प्रक्रिया अलिक लामो र महँगो मानिन्छ । तर, दाँत बाँध्ने गर्दा सौन्दर्यता बढाउँछ । दाँत छिद्रो भएको वा दाँत बाहिर उछिट्टिएको भएमा पनि बाँधेर मिलाउने गरिन्छ ।
दाँत बाँधेर मिलाउन कित खर्च लाग्छ ?
यो प्रविधि अलिक महँगो मानिन्छ । नेपालमा न्यूनतम २० हजारदेखि २ लाख ५० हजारम्म खर्च लाग्छ ।
दाँतको हेरचाह कसरि गर्ने ?
हामीले दाँत, गिजा र जिब्रोमा खासै ध्यान दिँदैनौ । यी कुरालाई समयमा ध्यान दियौँ भने धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । यी तीन कुरालाई ध्यान दिने हो भने ७० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य सुरक्षित रहन सक्छ ।
ब्रस कसरी गर्ने ? कुन–कुन समय गर्ने ?
विशेष गरेर बिहान र बेलुका दुई पटक ब्रस गर्नुपर्छ । त्यो पनि खाना खाएपछि मात्रै ब्रस गर्नुपर्छ । ब्रस गर्नु भनेको खानाखाएपछि दाँतमा अड्किएका कुरा बाहिर हटाएर मुखको सफई गर्नु हो ।
बालबच्चा र सबै उमेरका व्यक्तिले खानाखाएपछि बिहान र बेलुका दुई पटक अनिवार्य ब्रस गर्नुपर्छ ।
दाँतमा किरा लग्नु भनेको के हो ?
दातमा किरा लाग्ने समस्या फास्ट फुड र सरसफाइको कमीले हो । विभिन्न खालका केमिकल मिसिएको खानेकुरा खाँदा दाँत दुख्ने समस्या हुन्छ । चटपटे खादा पनि दाँत दुख्ने समस्या आउन सक्छ । चटपटे खाँदा त्यसले दाँतको इनामेल घटाउने गर्छ ।
अर्थात त्यस्ता खानेकुरामा विभिन्न केमिकल मिसिएका हुन्छन् । केमिकलले दाँतमा खानेकुरा अड्कियो वा खानेकुरा कुहियो भने पनि दाँत दुख्छ । दाँतमा किरा लाग्ने होइन । ब्याक्ट्रियाले दाँत दुख्ने ।
बेक्ट्रिया इन्फेक्सनले मान्छेलाई हैरान बनाउँछ । चलनचल्तीमा दाँत किराले खाएर दुख्यो भन्ने गरिन्छ । तर, किराले दाँत दुख्ने भन्दा पनि फोहर र ब्याक्ट्रियाले दाँत दुख्छ । दाँतमा किरा हुँदैन । फोहर भयो भने दुख्ने हो ।
श्वास किन गन्हाउँछ ?
दाँतको बीचमा जमेको फोहरले गर्दा श्वास गन्हाउने हो । दाँतको सफाइमा कमी भयो भने श्वास गन्हाउँछ । वा पेटको रोगले पनि श्वास गन्हाउन सक्छ ।
दाँतको आयु कति हुन्छ ?
दाँतको आयु यति भन्ने हुँदैन । दाँतको आयु बाँचुञ्जेल हुन्छ । हेरचाह गर्नुपर्छ । सफाइ गरियो भने जिन्दगीभरि दाँत सुरक्षित हुन्छ । दाँतमा समस्या भयो भने नयाँ दाँत पनि लगाउन मिल्छ । बच्च अवस्थामा दाँतको सफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । ७०–८० वर्षसम्म दाँतले काम गर्छ । मानिसका २० वटा दाँत फेरिने अवस्थामा रहन्छन् । दुधे दाँत र स्थायी दात दुई प्रकारका हुन्छ । दाँत ५२ वटा हुन्छन् । ती दाँत फेरिने र नफेरिन दुई प्रकारका हुन्छन् ।
गिजा किन दुख्छ ?
बुद्धिबंगारालाई ठाउँ भएन भने दुख्ने हो । मानिसको खानपिनले गर्दा वृत्तिविकासमा समस्या भएको छ । गिजामा ठाउँ भएन भने गिजा दुख्छ । हड्डीको स्टक्चरले गर्दा पनि गिजा दुख्ने हो । फिजियो लोजिकल वा प्याथोलोजिकले गर्दा पनि गिजा दुख्छ । दाँतमा किरा अर्थात ब्याक्टेरिया लागेर पनि गिजा दुख्ने गर्छ ।
मुखमा घाउ खटिरा किन आउँछ ?
सरसफाइका कारणले घाउ खटिरा आउने हो । घाउ खटिरा विभिन्न रोगले पनि आउने गर्छ ।
दाँतको सौन्दर्यता कसरी बनाउने ?
शरीरको अंगमध्ये दाँत सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले सौन्दर्यता दिन्छ । यसको सौन्दर्यतालाई खाने कुराबाट नै ध्यान दिने हो । जथाभावी रुपमा खानु हुँदैन ।
जे खानेकुरा खाए पनि दाँतलाई समयमा सफा गर्न भुल्नु हुँदैन । नियमित उपचार नै दाँतको सौन्दर्यताको उपयुक्त बिकल्प हो ।
दाँतबाट ठूला रोग लाग्छ कि लाग्दैन ?
लाग्छ । क्यान्सरका बिरामीहरू मुखका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थासम्म पुगेका हुन्छन् । दाँतबाट नै धेरै ठूला रोग लाग्न सक्छ ।
सुर्ती खाँदा दाँत बलियो हुन्छ भन्छन् ?
त्यो कदापि पनि होइन । बरु सर्ती खाने गर्दा मुखको क्यान्सर हुने गर्छ । ठूलो रोग लाग्ने गर्छ । मान्छेको ज्यान पनि जान्छ । दाँतलाई सुर्तीले कहिले पनि सहयोग गर्दैन ।
सुर्ती र चुरोटले प्राणघातका रोग निम्त्याउँछ । दाँत दुख्दा निको पार्न खाने पेनकिलरले किड्नी र अन्य अंगलाई असर पुर्‍याउँछ । चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि र पेनकिलर प्रयोग गर्नुपर्छ । जथाभावी औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग हुनेछ । धन्यवाद ।
Topics #दांत #​दाँत चम्काउनुस #दाँत दुखाईबाट बच्ने उपाय
Don't Miss it उखुको जुस पिउनुहोस्, तर याद गर्नुहोला यी कुराहरु
Up Next खान जाने स्याउ फल मात्र होइन, अमृत हो
यस्ता लक्षण देखा परे हुनसक्छ क्यान्सर
यी १० लक्षण देखिए क्यान्सरले छोड्दैन । र क्यान्सरले ज्यान लिन्छ । तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई…
21 hours ago Pradeep Karki
दिनभर हाइ आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् कारण जान्नुहाेस्
थकित हुने, पट्यार मान्ने, झिँझो, झर्को मान्ने, अल्छि गर्ने यो पुस्ताको विशेषता भइसकेको छ। दिन नै सुतेर बिताउने यो आधुनिक…
24 hours ago Pradeep Karki
अनुहारमा देखा पर्ने सम्स्याबाटै पत्ता लाग्छन् यी १० राेगहरू
अधिकांश रोगहरु कुनै न कुनै संकेतबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्तै केहि स्वास्थ्य समस्या छन्, जुन अनुहारबाटै थाहा पाउन सकिन्छ…
2 days ago Pradeep Karki
के तपाइ तनावमा हुन्नुहुन्छ ? यस्ता छन् तनावबाट मुक्त हुने उपायहरू
तपाईं आफ्नो कार्यालयमा तनावमा हुनुभयो भने राति धेर खाने वा जंक फूड खाने गर्न थाल्नुहुन्छ । यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई नराम्रो…
खाना खाने समय कति बेला उत्तम हाे ? जान्नुहाेस्
राती अबेर खाना खानुभन्दा बेलुका सबेरै खाना खाएर सुत्नु स्वास्थ्यका राम्रो मानिन्छ । शरीरको तौल सन्तुलित राख्न चाहनेहरुले त बेलुकी…
यस्ता छन्, अनुहारमा नरिवलको पानी लगाउँदा हुने फाइदा
१. नरिवलको पानीले दिनहुँ त्वचा धुने गर्नाले आँखामा भएको कालो घेरा हट्दै जान्छ । २. यसको नियमित प्रयोगले छालाको चाउरीपन…
नेपालमा ढाडजोर्नी दुख्ने समस्या बिकराल बन्दै , कसरी बच्न सकिन्छ यसबाट ?
विशेष गरी उमेर ढल्किँदै गएपछि शरीरमा भएको अधिकांश क्याल्सियमको मात्रा हाडजोर्नीले प्रयोग गर्ने गर्दछ र यदि क्याल्सियमको कमि हुन थालेपछि…
पहिलो बच्चालाई कसरी स्तनपान गराउने ? यस्ता छन् केहि टिप्स
धेरै दुखाई हुन्छ तर स्तनपान गराउने हो भने फर्मुला फिड अपनाउनुपर्छ, यसमा कुनै हानी छैन । यसमा विल्कुल पनि ध्यान…
आफ्नु उमेर भन्दा कमि देखिनको लागि अपनाउनुस यी सुत्र
१. खानामा सलाद, दही, दूध, हरियो तरकारी, दाल, गेडागुडी आदिका प्रयोग गरौं । खानामा जति धेरै विविधता भयो त्यति नै…
आजबाट स्वस्थानी व्रत प्रारम्भ, स्वस्थानी कथा सम्बन्धि केहि तथ्य जान्नुहोस
पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि शुरु भएर एक महिनासम्म चल्ने स्वस्थानी व्रतकथा आजैका दिनबाट शुरू हुँदैछ । स्वस्थानी कथावाचनको शुरुवात कहिलेदेखि भयो…
सखरका यी अत्यन्त उपयोगी फाईदाहरु
खादा मिठो हुने खानेकुरा भित्र पर्छ सखर । सखर वा चाकूको प्रयोग परम्पराका साथमा स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ । उखुको…
1 week ago biplov
किन चाहिन्छ चस्मा ?
बेसल सेल कार्सिनोमा हुनबाट रोक्छ घाममा सनग्लास नलगाउनाले बेसल सेल कार्सिनोमा नामक समस्या हुन सक्छ । यो छालाको क्यान्सरको सबैभन्दा…
किन मृत्युदर बढि हुन्छ साना चल्लामा ? कृषकले जान्नै पर्ने कुरा
प्रचलित भनाई छ असल शुरुवात भए आधा समस्या टर्छ । यो कुरा पंक्षिपालन व्यवसायमा पनि लागु हुन्छ । किनभने साना…
2 months ago biplov
भेडे खुर्सानी सेवन गर्नाले हामीलाई यस्ताे फाइदा गर्छ जानिराखाैँ
नेपालमा विभिन्न जातका खूर्सानीहरु पाइन्छ । त्यसमध्ये सोलेनेसी कुलको तरकारी हो खुर्सानी । प्राकृतिक रूपमा यो मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा…
2 weeks ago biplov
घरेलु उपचार (42)
व्यक्तित्व विकास (4)
सूचना प्रबिधि (12)